लघुवित्तका ऋणीले ब्याजदरमा छुट पाउने - नेपालबहस
लघुवित्तका ऋणीले ब्याजदरमा छुट पाउने
३१ वैशाख, काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरूले १० प्रतिशत सम्म ब्याज छुट पाउने भएका छन् । कोभिड १९ ले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितमा ऋणीलाई सहुलियत दिने निर्णय नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले गरेको हो ।
संघले ऋणीलाई चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म ब्याज छुट दिने जनाएको छ । हाल ७२ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । यी संस्थाहरुले २८ लाख ऋणीहरूलाई २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ ऋणी प्रवाह गरेका छन् ।
संघले एक परिपत्र जारी गर्दै सदस्य संस्थाहरूलाई ऋणी ग्राहकहरूलाई ब्याजमा संस्थागत क्षमताअनुसार ऋणीलाई ब्याजमा सहुलियत प्रदान गरी सुमधुर व्यावसायीक सम्बन्ध बनाउने काम गर्न आग्रह गरेको छ ।
यसैगरि, संघले सो परिपत्रमा सदस्य संस्थाहरुलाई कोभिडको संक्रमणबाट बच्न स्वास्थ मापदण्ड पालना गर्दै डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरि कारोबार गर्न समेत सुझाएको छ ।
दुई वाणिज्य बैंकको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक, कुनले कति दिदैँछन ब्याज ? १ महिना पहिले
माछापुच्छ्रे बैंकको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक, कुन खातामा कति ब्याज ? १ महिना पहिले
आरम्भ चौतारीले आठ दशमलव ८५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने २ महिना पहिले
नेपाल बङ्गलादेश बैंकको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक, ९ दशमलव ९९ प्रतिशतमै घरकर्जा पाइने ? २ महिना पहिले
पहिराेको उच्च जोखिमसँगै सात घर विस्थापित ४ दिन पहिले
तुलसीपुर बजारमा छाडा छोडिएका चौपाय ४ दिन पहिले
यी दुई इन्स्योरेन्सले आईपीओ निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा दिए निवेदन १ हप्ता पहिले
जबर्जस्ती बलात्कार गरेको आरोपमा एक पक्राउ २ दिन पहिले
सन्दीपले इंग्ल्यान्डमा हुने भाइटालिटी ब्लास्ट गुमाउने ३ हप्ता पहिले
मुलुक समृद्धि र उत्पादनतर्फ अगाडि बढेको छ : पूर्वसञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा ७ महिना पहिले
गाउँपालिकामा बम विस्फोट, जनप्रतिनिधि र स्थानीय त्रसित १ वर्ष पहिले
कालोपत्रमा गुणस्तरहीन गिटी र बालुवाकाे प्रयोग ! १० महिना पहिले
फुटबल खेलाडी लामाको कतारमा सफलतापूर्वक शल्यक्रिया ५ महिना पहिले